Madda Walaabuu Press: Xumura Hogantoota OPDO, Motummaa Woyaane Jalati – Same Disastrous Fate of All OPDO Leaders
Kan biraa haa hafuutii yoo Oromoon handhuura keenya magaalaa Finfinneedhaa baane Adaamaatti hin gallu jedhulleen farra misoomaa fi guddiinaati, miseensoota ABoti jedhee kan hiisisaa fi barataa barnootarraa hariisisaa ture eenyu? isaanuma. Egaa har’a moraalii maalitiin waayee warraaqsa diinagdee Oromoo haasa’u.? gongumaa jarri kun kana haasa’uuf moraalii itti hin qaban, waan fakkaatuus miti, kun ergama wayyaaneerraa fudhatanii gadi bahaniidha.
Jarri kun waan waggoota 26n darbaniif raawwatan innuu hafee waan waggaa 2 as itti jiran ummanni Oromoo waan dagate itti fakkaachuu mala, akkasitti yaadu taanaan kun abshaalummaa osoo hin ta’iin dhukkuba samuu guddaadha. Mmoraalii dhabuu malee abshaalummaa siyaasaatii jechuun gongumaa hin danda’amu.